Baggy Denim Harem Pants Buddhatrends
Baggy Style Baggy Denim Harem Pants
$65.70 $73.00 Manavotra 10% ($7.30)
Jereo ireo kiraro hodi-janak'ondry harem tsy mahazatra ireo. Mivezivezy manerana ny tanàna, mianatra amin'ny fanadinana na mamaky boky ao an-tokontany, ireo jeans funky sy comfy harem dia hahazo anao sasantsasany fanampiny ho an'ny làlana an-dalambe. Elastic waistband and pockets dia mampionona sy mampihetsi-po. Manampia sweatshirta na t-shirt ho an'ny alahelonao na aiza na aiza. Azonao atao koa ny mamorona amin'ny fanehoan-tenanao amin'ny tenanao ary manao akanjo miaraka amin'ny akanjo mendri-pandehanao miaraka amin'ny akanjo mendri-kaja ary mampiditra firavaka saro-bidy hafa.
Aoka ianao ho voalohany hanomboka fanatanjahan-tena ity endrika vaovao avy any Azia ity. Fomba iray, jereo ny isa etsy ambany.